Gentamycin Sulphate 10% jekiseni - China NCPCVET
mhinduro kuti jekiseni
Gentamycin Sulphate 10% jekiseni
Sanganisa Glutaral Solution
ZITA: Gentamycin Sulphate 10% jekiseni Kuronga: Gentamycin Sulphate jekiseni nerimwe Rine mamiririta rine Gentamycin sulphate 100mg CHARACTER: Hauoneki kana anenge Hauoneki zvakajeka zvokunwa. PHARMACOLOGICAL: Pharmacological nemigumisiro chigadzirwa ichi dzakasiyana-siyana giremu negative bacteria (akadai E. coli, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas aeruginosa, Pasteurella, Salmonella, etc.) uye anonzi Staphylococcus aureus (kusanganisira kugadzirwa mukati β- amide fungal utachiona) kunge antibacterial kushanda. Most streptococci ...
Gentamycin Sulphate jekiseni
Mumwe Rine mamiririta rine Gentamycin sulphate 100mg
Hauoneki kana anenge Hauoneki zvakajeka zvokunwa.
Pharmacological Migumisiro chigadzirwa ichi dzakasiyana-siyana giremu negative bacteria (akadai E. coli, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas aeruginosa, Pasteurella, Salmonella, etc.) uye anonzi Staphylococcus aureus (kusanganisira kugadzirwa mukati β- amide fungal utachiona) vane antibacterial nomugumisiro . Most streptococci (Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus faecalis, etc.), anaerobic utachiona (Bacteroides kana Clostridium), Mycobacterium tibhii, rickettsial uye hunokuvadza nemishonga makemikari.
Kushandiswa septicemia, urogenital zvirwere, kufema turakiti zvirwere, gastrointestinal zvirwere (kusanganisira peritonitis), biliary turakiti utachiona, mastitis uye ganda uye akapfava zvinyama zvirwere, non-yokuita zvinoitwa nemumuromo, kushandiswa intestinal noutachiona.
kuti vestibular dysfunction zvakawanda zvakajairika, asi anokonzerawo reversible renal toxicity, izvo pamwe kuwanda kwayo muna renal cortex ukama. Neapo neutachiona.
katsi iri unetseke makemikari, constants zvinogona kukonzera kuda kurutsa, kurutsa, salivation, uye ataxia.
neuromuscular ichivharira migumisiro kazhinji kunokonzerwa nokutaurisa mishonga vanokonzera. Cats, imbwa zvayo yokutindivadza pokuvhiyiwa, vadyi kushandisa kuti penicillin, streptomycin yakawanikwa kudzivirira chirwere apo, kazhinji chisingatarisirwi rufu, izvo imhaka wemauto rufimbi uye mhasuru relaxant yokuwedzera migumisiro neuromuscular blockade.
kushandiswa kwenguva refu kunogona kukuvadza itsvo.
Chipimo chemushonga AND Administration:
Mumwe dose, 2 ~ 4mg paminiti uremu muviri zvipfuwo, 3 ~ 5mg kuti imbwa nekatsi, kaviri pazuva
, 2 ~ 3days dzose.
Inogona pamwe carbenicillin Mabatirwo kwazvo nemabayo, asi pane kusapindirana ezvokunambira kunze kwomuviri waamai.
chigadzirwa ichi pamwe kuti penicillin, Streptococcus ane synergistic kushanda.
Kuva kufema mwoyo, kwete intravenous jekiseni.
Akakurudzira sherefu UPENYU:
KUCHENGETA ZVEKUDYA NEZVEKUSHANDISA:
Gentamycin jekiseni (Veterinary kushandisa chete)
Mumwe Rine mamiririta rine Gentamycin 100mg
10ml / 20ml / 50ml / 100ml pa chinu
Mombe, Fowl, Makwai, Horse, Pig, Cow, Camel, Dog, Cat.
Gastrointestinal uye zvirwere kufema kunokonzerwa gentamycin nehanya utachiona, kufanana E. coli, Klebsiella, Pasteurella uye Salmonella spp., Mune mhuru, mombe, mbudzi, makwai uye penguruve.
chipimo chemushonga andAdministration
For intramuscular Kutarisirwa General: Kaviri daily 1 Rine mamiririta. pa 20 - 40 makirogiramu. uremu muviri 3 days.
chinhu Gentamycin Sulphate 10% jekiseni
PRODUCT NAME Gentamycin Sulphate jekiseni
unorapa Gentamycin Sulphate jekiseni Mumwe Rine mamiririta rine Gentamycin sulphate 100mg
chiratidzo Gentamycin Sulphate jekiseni Rakashandiswa septicemia, urogenital zvirwere, kufema turakiti zvirwere, gastrointestinal Zvirwere (kusanganisira peritonitis), biliary turakiti utachiona, mastitis uye ganda uye akapfava
zvinyama zvirwere, non-yokuita zvinoitwa nemumuromo, kushandiswa intestinal noutachiona.
Chipimo chemushonga AND Administration Gentamycin Sulphate jekiseni Intramuscular jekiseni
CATEGORY Gentamycin Sulphate jekiseni antibacterial mushonga
WIthdrawal MUNGUVA Gentamycin Sulphate jekiseni Nguruve: 40days
chenjedzo Gentamycin Sulphate jekiseni chigadzirwa ichi ane mugumisiro kufema mwoyo, hazvigoni jekiseni nomutsinga
IPAI Animal Gentamycin Sulphate jekiseni nguruve makwai nemombe
Previous: Flunixin Meglumine jekiseni
Next: Iron Dextran jekiseni
Best Mutengesi Veterinary Medicine
jekiseni For Veterinary
Livestock uye yehuku Special Drugs
yehuku Veterinary Medicine
Veterinary Medicine Animal yehuku Medicine
Remubatanidzwa Sulfachlorpyridazine Sodium Powder
Lincomycin Hydrochloride jekiseni